Ungawakhiqiza kanjani ama-flavour emvelo kusuka kuma-botanicals - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ungawakhiqiza kanjani ama-flavour emvelo kusuka kuma-botanicals"
I-flavour yisici esibaluleke kakhulu sokudla neziphuzo. I-flavour isipiliyoni esihlanganisiwe sokunambitheka nephunga.
Ngakho-ke yini ukunambitheka? Ukunambitha kubhekisa emizweni etholakala ngaphakathi komlomo kubandakanya nolimi.
Futhi liyini iphunga? Iphunga yisipiliyoni esitholakala ngaphakathi kwamakhala okuhlobene ngokuqondile nomqondo wokuhogela.
Ukuze udale ukudla okunambitheka kanye neziphuzo, kubalulekile ukuthi izingcezwana ezinambithekayo zezithako zikhululwe futhi zivezwe ngendlela emnandi. Lokhu kungenziwa ngesikhathi sokupheka, lapho izithako ezingavuthiwe zesitsha zilungiswa ngaphansi kwezimo ezizuzisa kakhulu (isb. Ukushisa, i-maceration, inhlanganisela yezithako zokudla) nangokufaka izinongo namakhambi, okuyizithwali ezinamandla zokunambitheka.
Ekhiqizweni kokudla kwezimboni, izithasiselo ze-flavour (isb. Izinongo zokunambitha noma uwoyela obalulekile) zisetshenziselwa ukwenza ukunambitheka okungafaniyo nephrofayili yephunga.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela entsha yokukhiqiza ukunambitheka kwemvelo kusuka ku-botanicals. I-Ultrasonic cavitation yephula i-matrix yeseli ku-botanicals, ukuze kukhululwe ama-molecule e-flavour flavour. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusetshenziselwa kakhulu ukwahlukanisa amafutha abalulekile (isib. Kusuka ku-lavender, rose, bergamot, i-orange, i-anis, i-psyhe noma i-rosemary) kanye nezinye izinhlanganisela zokunambitheka (kufaka phakathi izintethezi ezinjenge-terpenes, i-alcohols, i-aldehydes, ama-esters, ama-ketones, ama-furanones).
Ukuba yindlela yokukhipha engeyona eyonga ukushisa, isizinda se-ultrasonic sivimbela ukonakaliswa okushisayo kwezakhi ezibucayi bokushisa futhi kuvikele ukunambitheka kanye nenani lokudla kwezakhi ezihlanganisiwe. Izinzuzo ezengeziwe zokukhipha i-ultrasonic izithako eziphelele zokukhipha, ukucubungula okusheshayo, nokusebenza okuphephile. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyahambelana ne-soltiv iningi futhi i-sonication ivame ukuvumela ukusetshenziswa kwe-soltiver ethambile, engeyona enobuthi (njengamanzi, utshwala, i-ethanol, i-glycerine, uwoyela wemifino njll.).
I-Hielscher Ultrasonics inesipiliyoni eside ekuthuthukiseni imishini yokukhipha i-ultrasonic yokusetshenziswa kwezimboni. Izithasiselo ze-Ultrasonic zingasetshenziswa njengendlela yokususa eyedwa yokukhipha noma ingahlanganiswa nezinye izindlela zokukhishwa njenge-hydrodistillation noma ukumnika.
Funda kabanzi ngezinzuzo zokukhishwa kwe-ultrasonic yezakhi zokunambitheka!